မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: စီးတီးဟော စတိတ်ရှိုးနှင့် ၁၅ကျပ်သင်္ကြန်... ၂၀၀၉ ခုနှစ်
Posted by mabaydar at 11:49 PM
thank for share the feeling of thingyan....
4/13/2009 4:11 AM
မဗေဒါကို မတွေ့လိုက်လို့ပေါ့။ တွေ့ရင်တော့ ဘာရမလဲ။ ခေါင်းပေါ်ကနေ လောင်းပစ် ဦးမှာ။ ဟားဟား။
4/13/2009 5:03 AM
ဆိုင်ကယ်သွားထားတော့ မသောက်ပဲမူးသွားတယ် ဟဲဟဲ
4/13/2009 8:41 AM
ချီးကျူးတဲ့ နာ့ကို ဖွာလူဒါတိုက် ဒါပဲ.....:P
သူတို့ပြောသလိုပဲ အလှဆုံးက မဗေဒါ သားသားကိုလဲ ဖာလူဒါ တိုက်
4/13/2009 9:56 AM
CHURCH ကျောင်းထဲမှာလဲအမှိုက်တွေ ပွနေတာပဲ၊ သောက်ချင် တခြားအချိန်သောက်ပေါ့ ခုတော့ ဒီလောက်ပွဲချိန်နဲနဲလေးမာတောင် လာပြီ:မူးရူးနေတယ်၊ စိတ်ပျက်ပါတယ်၊
hey LH, it's me HNL's sis :) happy to see u :D
တ်ိုလဲ သင်းကြန်ပွဲရောက်ခဲ့တယ်။ ၀က်သားတုတ်ထိုးနဲ့ကြာဆံကြောာ်ဝယ်စားခဲ့တယ်။ ပျော်စရာကြီး။
ကြွက်စုတ် မဟုတ်လောက်ဘူး။ ကြွက်ထက် အဆများစွာ ကြီးတယ်။
စလုံး သင်္ကြန်လည်း ပျော်စရာ .....
အောက်ဆုံးပုံ ...အတော်ချမ်းနေရက်လျှက်နှင့် ဓာတ်ပုံအလွန် အရိုက်ခံချင်သောကြောင့် အချမ်းကို အန်တု၍ အလှကို မာန်ပြုနေသည် ထင်ရ၏။ သင်္ကြန် အငွေ့အသက်နှင့် လွန်စွာ အသက်ဝင်လှပေ၏။ :D
4/14/2009 2:57 AM
ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးပြ၊ ရိုက်ပြသွားတာ ကျေးဇူးပဲ ညီမ။ ပျော်စရာကြီးပဲနော်။ စည်းကမ်း ပိုရှိခဲ့ရင်တော့ ပိုကောင်းမှာပေါ့လေ။
အောက်ဆုံးပုံအလှ ဆုံး ပြောရမလားမသိ ကျန်ပုံတွေက ကျောကုန်းတွေချည်းပါလို့
စတာက နောက်တာကို ပြောတာပါ။ :P
4/14/2009 9:47 AM
မဗေဒါသွားမှန်းမသိလို့..ဒါမှန်းသိဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်.. ဘယ်တွေသူတွေမှန်းမသိတာရယ် တစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေတာရယ် ဗွက်မပေချင်လို့ရယ်နဲ့ စင်အနောက်ဖက်မှာပဲနေဖြစ်လိုက်တယ်..
imm ... sis lal aednarr ko yout kea` par tal.. but.., 1 choe twe ka kwinapyin mar .. aww hit pii muu yuu nay kya tar tot ma kg woo naw.. singapore lo luu myoe sone nay tea`naing gan mar Koh myanmar yea` new year so thu myarr tweahtin kyii ag sin hnwal thit tal... ae lo myoe twe sii kan ma shi bal phyit nay tot ... thu myarr twe ka "min toh myanmar twe yea` new year mar ae lo bal loat kya lar " so pii ,pyaw sayar pyit twarr mar pop ...
ae dar lal 1 ku bar bal..akone lone ka sii kan shi shi pyaw kya yin thiet kg mar pal naw .. :)
:( ကျနော်က စင်ရှေ့က အကန့်ထဲမှာ ရောက်နေလို့ ဘာမှမစားလိုက်ရဘူးကွယ်။ ဆီထမင်းလေး တစ်ပွဲရယ်၊ ရွှေရင်အေးလေး တစ်ပဲရယ်ပဲ စားရတယ် (အဲ .. အထဲမှာ ကျွေးတာလဲ ဒါအကုန်ပဲကွယ့် :P)
အင်း.. အပေါ်က အကိုတွေ အမတွေအားလုံးပြောသလိုပါပဲ.. အားလုံးစည်းကမ်းရှိသင့်တာတော့ သေချာပါတယ်.. မသောက်နဲ့တော့ မပြောပါဘူး.. စည်းကမ်းရှိရှိ limit လေးနဲ့ သောက်ကြဖို့ကိုပြောတာပါ.. ဒီပုံမျိုးနဲ့ဆိုနောက်နှစ်တောင် စလုံး အစိုးရကခွင့်ပြုပါအုံးမလားမသိပါဘူး.. ပွဲပြီးတော့ မြန်မာတွေက funan မှာ ရွှံ့တွေကိုဆေးကြတာ အိမ်သာပိုက်ပိတ်လို့ ရဲတောင်ရောက်လာတယ်ကြားပါတယ်.. ဟင်းးးးးးးး... မလွယ်ပါဘူး.. အို.. အစထဲက ဟိုလူကြီးတွေမကောင်းလို့ ပျက်ပြီးသားပဲ ဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူးဆိုပြီး မထိမ်းပဲမနေသင့်ပါဘူး.. ရေရှည်ကိုစဉ်းစားပြီး ကိုယ့်အမျိုးဂုဏ် ကိုယ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတာ ခေါင်းထဲရှိကြရဲ့လားသိပါဘူး..
အင်း အဲဒီနေ့ကမတွေ့ပါလားဗျ။ ကျတော်လဲ ရှိတယ် ကွင်းထဲမှာ ..တွေရင်တော့ ရေလောင်းအုံးမှာ..နောက်နှစ် တော့ ရှိ၇င်တောင် သွားဖို့စဉ်းစားရမယ်...
FYI , Ma baydar. I am not sure whether the facts are true.
History of Songkran in Thailand(Water festival)
ဟုတ်တယ်ဗျို့ ...သမိုင်းမှာ ပြန်လေ့လာကြည့်ရင်...
ယိုးဒယားက မြန်မာကို လိုက်တုတာပဲများတာ...
ဗိသုကာမှာလည်း ယိုးဒယားအချိုးဆိုပြီး. ခေါင်းမိုအချိုးကရှိသေးတာ. တကယ်တော့ မြန်မာတွေရဲ့ပညာတွေပါ.. ခြင်းလုံးဆိုလဲ... မြန်မာတွေက. ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ ရယ်.. ဟန်ရေးပြဖို့ ရယ်လောက် . လုပ်နေချိန်မှာ... ယိုးဒယားက ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအနေနဲ့ တီထွင်လိုက်တော့.. သူတို့ ရဲ့ အားကစားဖြစ်သွားရော.. . ရေကစားတာလည်း.. ဘယ်လောက်ပူပြင်းတဲ့ နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်.. အေးခဲတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်.. မြန်မာတွေ အတာအချိန်မှာတော့.. ရေကစားတာ.. ယိုးဒယားထက် တော်တော်ရှေးကျပါတယ်... အသေးစိတ်ကတော့.. သမိုင်းပညာရှင်တွေ ရှိပါတယ် .. ကျနော်သိသလောက်တော့ ဒေါက်တာ မတင်ဝင်း ရေးဘူးသလားလို့ .. . မဗေဒါ ရောက်နေမှန်းသိရင်.. ရေခဲရေနဲ့လာလောင်းပါတယ်.. ဟွန်း.. မသိလို့ နော်.. ကျနော့့် သူငယ်ချင်းတွေကတော့... အရက်သောက်ပေမယ့်... နေရာတောင်မရွေ့ ဘဲ.. အားပေးတာခင်ဗျ...ယဉ်ကျေးစွာနဲ့ ပါခင်ဗျာ.. တချို့ ကတော့.. တော်တော်ဆိုးပါတယ်..
အခုပိုစ့်မှာ ရေးနေတဲ့သူတွေအာလုံးက အဲဒီနေ့ပွဲမှာ မူးရူးနေတဲ့သူတွေအာလုံးကို အပြစ်ပြောနေတာကိုပဲ တွေ့ရတယ်.. နည်းနည်းစာနာကြည့်ရအောင်ပါ.. အခုလာတဲ့ လူရဲ့ ၃ ပုံ ၂ ပုံဟာ WPသမားတွေဖြစ်ဖို့များပါတယ်.. သူတို့ဘယ်လောက် လုပ်ရတယ်ဆိုတာ စလုံးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူအများစုက သိကြမှာပါ.. ဟိုလူငေါက် ဒီလူငေါက် ၇ ရက်လုံးလုပ်ရ ဒီလိုဘဝမျိုးထဲကနေမှ ဒါမျိုးကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ပွဲကို ကြုံတဲ့အချိန်မှာ ဒီပွဲဟာ သူတို့စိတ်တွေရဲ့ မွန်းကြပ်မှုတွေ၊ ဖိအားတွေအတွက် ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ စာနာကြည့်သင့်ပါတယ်.. သူတို့ဟာ ကျနော်တို့လို ကောမန့်မရေးနိုင်ပါဘူး.. ဘလောဂ်ဖတ်ပြီး၊ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ ကမ္ဘာပတ်ပြီး စိတ်အပန်းမဖြေနိုင်ပါဘူး.. ကျနော်တို့အတွက် ဒီပွဲဟာ ပွဲတစ်ပွဲပါပဲ၊ သူတို့အတွက်ကျတော့ ဒိလိုပွဲမျိုးဟာ သိပ်ကိုကြီးကျယ်တဲ့ စိတ်အပန်ဖြေပွဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အဲဒီနေ့ပွဲဟာ ဘယ်လောက်ညံ့တဲ့ပွဲဆိုတာကို တော်ရုံတန်ရုံလူတောင် သိနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်သူဆိုဆိုတီးတီးကက ဘယ်လိုရိတ်ရိတ် သူတို့ပျော်တာပါပဲ။ ဒါကို နိုင်ငံခြားသားက ကြည့်ပြီးအထင်သေးမှာလား. ဘာလား. ညာလားနဲ့ ဖြစ်နေကြတယ်. မြန်မာကို အထင်သေးမှာစိုးတာထက် မြန်မာဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ကိုပါရောအထင်သေးခံရမှာစိုးနေတာက ပိုမယ်လို့ ယူဆမိတယ်. ကျနော် နားလဲမလည်နိုင်ပါဘူး.. မြန်မာပြည်မှာ ဒီလိုပွဲဆို အနည်းဆုံး ရန်ပွဲကတော့ ၄ ၅ ပွဲပါပဲ. အဲဒီနေ့က ရန်ဖြစ်တယ်လို့ မကြားမိပါဘူး.. ဒါဆိုရင်ကိုပဲ တော်တော်လေးကောင်းနေပြီလို့ ကျနော်သဘောရပါတယ်.. အာလုံးကောင်းသည်လို့ မဆိုလိုပါ.. ဒါပေမယ့် အပေါ်မှာရေးကြသလိုမျိုးတော့ သူတို့ကို ကျတော် မရေးရက်ပါ။
မြန်မာတွေ စည်းကမ်းဖောက်လို့ ထီးနန်းပျောက်ခဲ့တဲ့အတွက် အနှစ်တစ်ရာတောင် သူများလက်အောက်မှာကြာခဲ့ပါတယ်.. ပျော်တာက ပျော်လို့ရပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ ပျော်ဖို့ကိုပြောတာပါ.. တန်ရင်ဆေး.. လွန်ရင်ဘေးဆိုတဲ့ စကားပုံကိုကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်..
သူ့အခွင့်အရေးအရ သောက်နိုင်တယ် ပျော်နိုင်တယ်.. သို့သော်.. လူမြင်ကွင်းမှာ အထူးသဖြင့် တခြားနိုင်ငံလူမြင်ကွင်းမှာ မတင့်တယ်တဲ့ အပြုအမူတွေ လုပ်နေကြတာဟာ မြန်မာတစ်မျိုးလုံးရဲ့ ဂုဏ်ကို ထိခိုက်စေပါတယ်.. အဲဒိအတွက်လဲ အမှန်တကယ်ကို ရှက်ပါတယ်..
ဟုတ်ပါတယ်.. မြန်မာဆိုတာကို အထင်သေးတာထက် မြန်မာဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုရောအထင်သေးမှာစိုးနေတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်.. လူမှာအမျိုး ကြက်မှာ အရိုးဆိုသလို.. ထိုသူတွေက စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ပျော်ပါးနေပေမဲ့.. မြန်မာဆိုတဲ့အများဆိုင် အုပ်စုထဲမှာ ကျမတို့အားလုံးပါဝင်နေပါတယ်..
ဒါမျိုးဟာ မြန်မာတွေပါလားလို့ သူများက လက်ညှိုးထိုးပြီး ငါးခုံမတစ်ကောင်ကြောင့်တစ်လှေလုံး မပုတ်စေချင်ပါ.. အမျိုးဂုဏ်ကို ထိမ်းသင့်တယ်လို့ပြောတာလဲ အဲဒိသဘောပါပဲ..
ကျမရေးထားတဲ့စာထဲမှာရော အပေါ်က ကွန်မန့်ရေးခဲ့တဲ့သူထဲမှာရော.. ဘယ်သူမှ အဆင့်အတန်းခွဲပြီး ဒီလို စည်းကမ်းပျက်နေတာ WP တွေပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ မစွတ်စွဲထားပါဘူး.. ကျမတို့ပြောနေတာ ဘယ် Pass ကိုင်ထားတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် မူးပြီး စည်းကမ်းပျက်နေတဲ့သူတွေကိုပါ..
ဒီလိုသာ ဝေဖန်ထောက်ပြ ထိမ်းသိမ်းပေးမဲ့သူမရှိရင် အကွတ်မဲ့တဲ့ ကြမ်းဗရမ်းဗတာဆိုသလိုဖြစ်နေမှာပါ..
အပေါ်က အမည်မသိကိုမေးလိုက်ချင်ပါတယ်.. မြန်မာလူမျိုးလို့ပြောလိုက်လို့ တခြားလူမျိုးတွေက အထင်သေးဆက်ဆံတာမျိုး ခံခဲ့ဖူးမယ်ထင်ပါတယ်.. ကိုယ့်နိုင်ငံက အစထဲက မဖွံ့ဖြိုးလို့ သူများနိုင်ငံမှာ အလုပ်လာလုပ်နေကြလို့ အနှိမ်ခံရတဲ့အထဲမှာ ဒီလို စည်းကမ်းပိုင်းကိုပါထပ်အပြောခံလာရမယ်ဆိုရင် ရစရာကိုရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး..
ဒိအတွက် တခြားနိုင်ငံသားတွေမပြောခင်မှာ.. ကိုယ်အချင်းချင်း ထိမ်းထိမ်းသိမ်းသိမ်း ထောက်ပြချင်းသာဖြစ်ပါတယ်.. WP မို့.. overstay မို့ နှိမ်တာမျိုး တစ်ဦးတစ်ယောက်မှာမှ စိတ်မရှိပါ...
ရန်ပွဲမဖြစ်ဖူးဆိုတာလဲ စကာင်္ပူမှာ နေထိုင်ခွင့်လေး ပျောက်သွားမှာစိုးလို့ပါ.. အဲဒိ အထိမ်းသာမရှိရင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါ..
ဒီလောက်ကတော်သေး.. ဒီထက်မဆိုးတာကံကောင်းလို့တွေးမဲ့အစား.. တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကသာ နဲနဲစီထိမ်းသိမ်းသွားပြီး ဒီထက်ပျော်စရာကောင်း ကျက်သရေရှိတဲ့ သင်္ကြန်ပွဲကြီးကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ရင် သိပ်ကောင်းမှာလို့ တွေးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်... ဒီလို အညင်းပွားမှုမျိုးတောင် ဖြစ်လာစရာမလိုပါဘူး...
နှိုင်းယှဉ်တယ်ဆိုရာမှာ ပိုကောင်းချင်ရင် ပိုကောင်းတဲ့ဟာနဲ့သာ နှိုင်းယှဉ်သင့်ပါတယ်.. ဒါမှလဲ တိုးတက်မှုရှိမှာပါ..
အထက်ပါ ကွန်မန့်ကို ဆင်ခြေဆင်လက်မျိုးစုံနှင့် လူမိုက်အားပေးအရေးအသားများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာလူမျိုးများ သူများတစ်ပါးတိုင်းပြည်ကို ထွက်၍အလုပ်လုပ်နေရအုံးမည်မှာ နောင်အနှစ်တရာမကပင် ရှိနေအုံးမည်ကို မိမိမည်သူမည်ဝှာဟု ဖော်ပြ၍မှ မရေးသားရဲသူအထက်ပါ အမည်မသိပုဂ္ဂိုလ်နားလည်နိုင်စေရန် စေတနာရှေ့ထား၍ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ပြန်ကြားရေးသားပေးလိုက်ပေသည်..
ကျနော်က ဘာကောင်မှမဟုတ်လို့ အမည်မသိလုပ်လိုက်တာကို အစ်မက တုံ့ပြန်ရတာအားမရ ဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်.. အဲဒီအတွက်တော့ ဆောရီးပါ ခင်ဗျာ..
"အထက်ပါ ကွန်မန့်ကို ဆင်ခြေဆင်လက်မျိုးစုံနှင့် လူမိုက်အားပေးအရေးအသားများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာလူမျိုးများ သူများတစ်ပါးတိုင်းပြည်ကို ထွက်၍အလုပ်လုပ်နေရအုံးမည်မှာ နောင်အနှစ်တရာမကပင် ရှိနေအုံးမည်ကို မိမိမည်သူမည်ဝှာဟု ဖော်ပြ၍မှ မရေးသားရဲသူအထက်ပါ အမည်မသိပုဂ္ဂိုလ်နားလည်နိုင်စေရန် စေတနာရှေ့ထား၍ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ပြန်ကြားရေးသားပေးလိုက်ပေသည်.." လို့ ရေးထားတာတွေ့တဲ့ အတွက်လဲ ကျနော်ပြုံးမိပါတယ်.
ကျနော်ဆိုလိုတာက "၁ နှစ်လုံးမှ ၁ခေါက်လောက်ပဲ ကြုံရတဲ့ပွဲမျိုးဟ. ငါ့လူမျိုးတွေ အများကြီးရှိတုန်း ကဲလိုက်ဦးမှ" ဆိုတာကို နားလည်ပေးနိုင်မလားလို့ မေးကြည့်တာပါ
"ဟာ..ဒီပွဲက ငါတို့ မြန်မာတွေရဲ့ ရိုးရာပွဲဟ. သူများနိုင်ငံမှာလုပ်တာ.. ငါတို့ စည်းနဲ့ကမ်းလေးနဲ့ နိုင်ငံဂုဏ်တက်အောင်တော့ သွားအားပေးမှပဲ" ဆိုပြီး လာတဲ့လူ တစ်ယောက်မျှရှိမယ် မထင်ပါ.. အမ စိတ်ထဲတော့ ဘယ်လိုတွေးပြီး ဘယ်လိုလာအားပေးလဲ မသိပါ. အလုပ်ထဲမှာလဲ သူတို့ကို ဂရုစိုက်ရ၊ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ပျော်တဲ့ပွဲပါ သူတို့ကို ဂရုစိုက်ရ.. "သူများလူမျိုးတွေကို သတိထားပြီး အထင်မသေးအောင် ပျော်ကြဟေ့" ဆိုတာတော့ လာပြီးပျော်နေတဲ့သူတွေကို ပြောရမှာတော့ အားနားမိပါတယ်..
မြေးကလေးနဲ့ မြေးကလေး သူငယ်ချင်းတစုလို မွေးမြေရပ်နဲ့ အဝေး တနေရာမှာ ရှိနေသော်ငြား အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်ကို ထိန်းသိမ်းနေကြဆဲဆိုတာ မြင်ရတွေ့ရတာဖြင့် အဘိုးအနေနဲ့ အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်လှပါတယ်။ ဒီလို အနာဂတ်ရဲ့ လူငယ်တွေ ရှိနေသရွေ့ အဘိုးတို့ မြန်မာပြည်ကြီးဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မျက်နှာငယ်စရာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိဘူးဟေ့လို့သာ ကြွေးကြော်လိုက်ချင်စမ်းတော့တယ်။ အမျိုးကိုချစ်တဲ့ ငါ့မြေးလေးတသိုက်ကို အဘိုးအနေနဲ့ အကြံဥာဏ် ပေးချင်တာကတော့ မြန်မာပီပီ မြန်မာစာလုံးပေါင်းလေးများကို ဂရုတစိုက်နဲ့ မှန်ကန်အောင်ပေါင်း၊ သဒ္ဒါမှန်မှန် ၀ါကျလေးတွေ ဖွဲ့စေချင်ပါတယ်။ ဥပမာ။ ။ စည်းကမ်းမဲ့ပြစ်၊ ကွမ်းတံတွေးထွေး အံကြ၊ စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။ ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာ့စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်းလေး ဆောင်ထားကွဲ့ မမှားဘူး ငါ့မြေး။ စင်ကာပူလို့ခေါ်တဲ့ တိုးတက်ခေတ်မှီတဲ့ နိုင်ငံကြီးမှာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ပညာတတ်တွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနေနိုင်တဲ့ မြေးလေးတို့လို အရည်အချင်းရှိ မြန်မာလူငယ်လေးတွေအနေနဲ့ သိုးဆောင်းစကားများ အားနည်းနေမှာတော့ဖြင့် အဘိုးမပူပါဘူး။ မြန်မာစာ မြန်မာစကားနဲ့ အထိအတွေ့နည်းလေတော့ တခါတလေ ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲဆိုသလို ဖြစ်တတ်တာလေးတွေကို အဘိုးက စေတနာသန့်သန့်နဲ့ သတိပေးချင်တာပါ။ အမျိုးဂုဏ်ထိန်းသိမ်းချင်တဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးကို သူများတကာ အထင်သေးမှာ ကြောက်တဲ့ မြေးလေးရဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့ ဆောင်းပါးလေးမှာ မြန်မာစာလုံးပေါင်းတွေ မှားယွင်းနေတာတွေ့တော့ တချို့တချို့သော အမြင်စောင်းသူတွေက အမျိုးကို လူမြင်ကောင်းရုံ ပါးစပ်နဲ့သာ ချစ်နေတယ်လို့ အထင်သေး ကဲ့ရဲ့ကြမှာ စိုးရိမ်မိတဲ့အတွက်သာ အဘိုးက သတိပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ကဲ စာလဲ ရှည်လှပြီ။ နှစ်ထပ်ရှိမှ မှတ်မိတယ် ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးအတိုင်း တခေါက်လောက်တော့ ထပ်ပြောပါရစေဦး။ အမျိုးကို ချစ်တယ်ဆို ကိုယ့်မြန်မာစာလုံးပေါင်းလေးတော့ မှန်အောင်ပေါင်းကွဲ့ နော်။
စစ်ကိုင်းချောင်းမှ အဘိုးအောင် ကိုတော့ လေးစားမိပါတယ်ဗျို့ ။ အမည်မရှိနဲ့ရေးလို့ငါ့လဲ ရမ်းတုတ်မနေနဲ့ ဦးနော်။ ဟိုဖြည့် ဒီဖြည့် စိတ်ညစ်လွန်းလို့ ဟ။
မြေးကလေးကလဲ အတတ်နိုင်ဆုံးအစွမ်းကုန် ကိုယ်သိသလောက် တတ်သလောက်ကို တင်ပြတာပါ... အမှားအယွင်းဆိုတာတော့ ရှိကြစမြဲပါ.. ရှာလေလဲ တွေ့လေဖြစ်နေအုံးမှာပါ... ဒါပေသိ မြေးလေးမဗေဒါဟာ ပညာရှိက၀ိမဟုတ်သလို... ပိုက်ဆံယူကာ စာရေးစားနေသူလဲမဟုတ်ပါ... ၀ါသနာအရသာ အပျော်တမ်း စာရေးနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်... ၁၀တန်းအောင်ပြီးကတည်ကလဲ မြေးလေးတို့ဟာ မြန်မာစာကို သဒ္ဒါကျကျ စာကျကျရေးဖတ်ဖို့ အလှမ်းကွာခဲ့တာ ခုဆိုရင် ၁၀စုနှစ် ၁စုနီးပါးရှိခဲ့ပါပြီ... စကာင်္ပူကိုရောက်တော့ မြန်မာစာကို ပြန်ဖတ်ဖြစ်တာဆိုလို့လဲ ခုနောက်ပိုင်းဘလော့တွေပြန်ဖွင့်မှပါ... မြေးလေးတို့မှာ မအားတဲ့ကြားက ၀ါသနာပါလွန်းလို့သာ ဤဘလော့ကို အပြောအဆိုခံကာရေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်... ဝေဖန်အကြံပြုခြင်းအတွက် အတိုင်းထက်အလွန်ဝမ်းသာမိပါတယ်... ကြိုလဲကြိုဆိုပါတယ်... အမှားတွေအတွက် ၀န်လဲဝန်ခံပါတယ်.. ဘလော့ရေးတဲ့အခါမှာ စိတ်ခံစားမှု(Mood)ရှိရတဲ့အပြင်.. စာသားချောမွေ့ဖို့.. ကိုယ်တင်ပြပုံ... အပြင်အဆင်.. အစစအရာရာကို မြေးလေးတို့ဘလော့ဂါတွေက အာရုံထားရပါတယ်.. ခေါင်းထဲပေါ်လာတာလေး ချက်ချင်းပျောက်မသွားခင် အမြန်ချရေးလိုက်ချိန်မှာ စာလုံးပေါင်းဆိုတာကို အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ သတိထားပါတယ်... နောက်ပြီး ကွန်ပြူတာနဲ့ ရိုက်ရတော့ Typo error ဆိုတာလဲ ရှိတတ်ပါသေးတယ်... တချို့စာလုံးတွေကျတော့ မြေးလေးကိုယ်တိုင်တောင် မှားလို့မှားမှန်းမသိပါဘူး... အကယ်၍များ အဘိုးအောင်သာ ကူညီဆောင်မပေးမယ်ဆိုလျှင် မြေးလေးမှားသမျှစာလုံးပေါင်းလေးများကို နောင်များမှာ ကွန်မန့်မှာဖြစ်စေ ပြင်ပေးပါ... မြေးလေး လေ့လာသင်ယူပါ့မယ်.. ပြင်ပေးပြီးသားစာလုံးပေါင်းတွေ နောက်ထပ်မမှားရလေအောင်လဲ ဂရုစိုက်ပါ့မယ်... အားတဲ့အခိုက်လေး စိတ်အပန်းဖြေအနေနဲ့ စာရေးနေချိန်မှာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းကို လှန်လှန်ကြည့်နေရဖို့ဆိုတာလဲ မြေးလေးတို့ရဲ့ စာရေးချင်စိတ်ကို လျော့ပါးစေပါတယ်... လူငယ်တွေ စာရေးချင်စိတ်လေးရှိတုန်း ရေးတာလေးကို အမှားများပါရင် ခွင့်လွှတ်နားလည်ပြီး ဖတ်ရှုပေးဖို့လဲ ဘလော့ဂါအားလုံးကိုယ်စား မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ... မဗေဒါရဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေဟာ ကြိုးစားချင်စိတ်မရှိလို့ ညံ့ဖျင်းလို့ အလကားပေးနေတယ်ထင်ရင်လဲ မဗေဒါလွန်စွာမှ စိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ ပြောပြရစေ...
အဘိုးအောင် စာလုံးပေါင်းလာစစ်ပေးမဲ့နေ့များကို စောင့်မျှော်လျှက်...
စာလုံးပေါင်း မှားတတ်သူ ဘလော့ဂါမြေးမလေး..